ကွန်​ပျူ​တာ ​ဘ​တ္တ​ရီ​နှင့် ​ဖုန်း​ဘ​တ္တ​ရီ​တွေ ​ဘာ့​ကြောင့် ​တာ​ရှည်​မ​ခံ​ရ​သ​လဲ ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
​ကွန်​ပျူ​တာ ​ဘ​တ္တ​ရီ​နှင့် ​ဖုန်း​ဘ​တ္တ​ရီ​တွေ ​ဘာ့​ကြောင့် ​တာ​ရှည်​မ​ခံ​ရ​သ​လဲ
​ဖြိုး​ရဲ : ​အစ်​ကို​ညီ​နေ​မင်း ​ကျွန်​တော့် laptop ​က ​ဝယ်​ထား​တာ ​မ​ကြာ​သေး​ဘူး ​ဘ​တ္တ​ရီ​က ​နာ​ရီ​ဝက်​လောက်​ပဲ ​ရ​တယ် . ​သူ​များ​တွေ​ကျ​တော့ ​နှစ်​နာ​ရီ ​သုံး​နာ​ရီ​လောက်​တောင် ​ရ​ပါ​တယ် . ​ဘယ်​လို ​လုပ်​သင့်​သ​လဲ ​အ​ကြံ​ဥာဏ်​လေး ​ပေး​ပါ​ဦး .
​ဖြေး​ကျွန်​တော် ​ဝဘ်​ဆိုက်​နှင့် ​ပတ်​သက်​ပြီး​တော့ ​မ​ရေး​ဖြစ်​ခဲ့​တာ ​ကြာ​ပါ​ပြီ connection ​အ​ခက်​အ​ခဲ​နှင့် ​ကျန်း​မာ​ရေး ​အ​တွက်​နဲ့ ​မို့​ပါ . ​အား​လုံး​ကို ​မ​င်္ဂ​လာ​ပါ​လို့ ​နှုတ်​ခွန်း​ဆက်​လိုက် ​ပါ​တယ် . ​အား​လုံး​ပဲ ​လုပ်​ငန်း​ကိုင်​တာ​များ ​အ​ဆင်​ပြေ ​ချော​မွှေ့​ကြ​မယ်​လို့ ​မျှော်​လင့်​ပါ​တယ် . ​အ​ဆင်​ပြေ​ပါ​စေ​လို့​လဲ ​ဆု​တောင်း​ပေး ​လိုက်​ပါ​တယ် . ​နောက်​ပိုင်း ​နည်း​ပ​ညာ​များ​ကို​သာ ​အ​သား​ပေး ​ရေး​သား​တော့​မှာ ​ဖြစ်​ပါ​တယ် .
​ကို​ဖြိုး​ရဲ​ရေ ​ကျွန်​တော်​တို့​အ​နေ​နဲ့ ​သိ​သင့်​တဲ့ ​တစ်​ချက်​ကို ​လူ​တော်​တော်​များ​များ ​မ​သိ​တာ​လား . ​သိ​ရဲ့​သား​နဲ့ ​အ​ပျင်း​ကြီး​တာ​လား ​တော့ ​မ​သိ​ပါ​ဘူး . ​ဘ​တ္တ​ရီ​အ​ခြောက်​မှန်​သ​မျှ phone, ups, ​နှင့် laptop ​မှာ​ပါ​တဲ့ ​ဘ​တ္တ​ရီ​အား​လုံး​ကို ​သုံး​တော့​မယ်​ဆို​ရင် ​မူ​လ​ပ​ထ​မ ​ဝယ်​စဉ်​တုန်း​က ​ပါ​တဲ့ ​ဘ​တ္တ​ရီ​အား​ကို ​ကုန်​အောင်​သုံး​လိုက်​ပါ . ​ကုန်​တဲ့​အ​ချိန်​အ​ထိ ​အား​သွင်း​ကြိုး​ကို ​မ​ထိုး​ရ​ပါ​ဘူး . ​အား​ကုန်​ပြီ​ဆို​တာ​နဲ့ ​စ​ပြီး​တော့ ​ဘ​တ္တ​ရီ​ကို 24 ​နာ​ရီ ​ပြည့်​တဲ့ ​အ​ထိ ​အား​သွင်း​ရ​မှာ ​ဖြစ်​ပါ​တယ် . ​အား​သွင်း​နေ​စဉ် ​ကာ​လ​အ​တွင်း (charging)​အား​သွင်း​ထား​တဲ့ ​ဘ​တ္တ​ရီ​ကို ​လုံး​ဝ​မ​သုံး​ရ​ပါ​ဘူး. 24 ​နာ​ရီ​ပြည့်​ပြီး​သွား​တာ​နဲ့ ​စ​ပြီး​တော့ ​သုံး​လို့​ရ​ပါ​ပြီ . ​အဲ့​လို ​နာ​ရီ​အ​ပြည့်​သွင်း​ထား​တဲ့ ​ဘ​တ္တ​ရီ​နှင့် ​နာ​ရီ​အ​ပြည့်​မ​သွင်း​ထား​တဲ့ ​ဘ​တ္တ​ရီ​ကို ​ယှဉ်​ပြီး​သုံး​ကြည့်​လိုက်​ပါ . 24 ​နာ​ရီ​ကြာ​အောင်​အ​ထိ ​အား​သွင်း​ဖို့ ​စိတ်​မ​ရှည်​ဘူး​ဆို​ရင်​တောင် 14 ​နာ​ရီ​ကို ​အ​နည်း​ဆုံး​ထား​ပြီး​တော့ (charging)​အား​သွင်း​ပေး​ရ​ပါ​တယ် . ​ဒါ​ဟာ ​ဘ​တ္တ​ရီ​တစ်​လုံး​အ​တွက် ​ပ​ထ​မ​ဦး​ဆုံး​သွင်း​တဲ့ ​အား​ဟာ ​အ​ရမ်း​ကို ​အ​ရေး​ကြီး​ပါ​တယ် . ​အ​ခု​ပြော​တဲ့​နည်း​ကို ​သုံး​ကြည့်​လိုက်​ပါ . ​အား​လုံး​ပဲ ​အ​ဆင်​ပြေ​ကြ​လိမ့်​မယ်​လို့ ​မျှော်​လင့်​ပါ​တယ် .
hellomummy007@gmail.com April 7, 2010 at 9:16 AM
​ကောင်း​တယ်​အစ်​ကို ​ဒီ​လို​ရေး​ပေး​တဲ့ ​အ​တွက်​ကျေး​ဇူး​တင်​ပါ​တယ်
winhtet April 9, 2010 at 3:34 AM
​ကျ​နော် ​အ​ရင်​က​လုံး​ဝ​မ​သိ​ပါ​ဘူး..။ ​ကျ​နော်​ကွန်​ပျူ​တာ​ဝယ်​တုန်း​က ​ဆိုင်​က​ပြော​တာ ၆​နာ​ရီ​အား​သွင်း​ရင်​ရ​ပြီ​လို့​ပြော​ပါ​တယ်..။ ​အ​ကို​အ​ခု​ပြော​ပြ​မှ ​သေ​ချာ​သိ​ရ​တာ​ပါ..။ ​အ​ကို့ ​ကို​ကျေး​ဇူး​တင်​ပါ​တယ်..။ ​နောက်​ဝယ်​မဲ့​သူ​ငယ်​ချင်း​တွေ​ကို​လဲ ​လက်​ဆင့်​ကမ်း​လိုက်​ပါ့​မယ်..။
Andrew April 16, 2010 at 10:28 PM
I heard we have to charge the new battery for 24 hrs b4 we used, isn't it ??
​ကွန်​ပျူ​တာ ​ဘ​တ္တ​ရီ​နှင့် ​ဖုန်း​ဘ​တ္တ​ရီ​တွေ ​ဘာ...